Iyo drone uye kamera kambani DJI inoenderana zvakanyanya neApple kupfuura isu zvatinofunga? | Ndinobva mac
Kune avo vedu vanotevera makambani maviri, Apple uye DJI, izvo zvandino bvunza mune ino chinyorwa zvinogona kuita zvine musoro zvakanyanya. Ndanga ndichiteera Apple kweanopfuura makore gumi, zvisinei ndakapinda munyika yeDII, kambani inotungamira mukutengesa drones, ine yakagadzika kamera inonzi OSMO, mushure mezvo ini ndakawana iyo OSMO Nhare uye mushure mezvo ndakapinda mairi neMavic Pro drone uye munguva pfupi yapfuura naDI Goggles uye iyo itsva OSMO +.
Parizvino tinogona kutaura kuti chinhu chete chaunogona kufunga ndechekuti ini ndinofarira vese Apple uye DJI yemhando yezvigadzirwa zvavo. Ndiri kuita mamwe mavhidhiyo ezvidzidzo uye ndafunga kuti kubheja kwaDII kwakarurama.
Nekudaro, kwenguva yakati ikozvino, ndanga ndichicherekedza iyo DJI uye nzira yaApple yekutengesa yakafanana. Zvigadzirwa zvemakambani ese ari maviri zvinochengetwa kusvika pakukwirira, kurongedza kwavo kunofungidzirwa zvakadzama uye minimalism mavari inogoneka. Kune izvi zvese, ndakatanga kufungidzira kuti DJI ine hukama neApple kupfuura zvatinofunga.
Zvakanaka, kana fungidziro dzandaive nadzo dzaive dzisina kukwana, zvibvumirano pakati peDII neApple zvinowoneka usiku hwese kuitira kuti madhiraoni nema stabilizers eiyo iPhone atange kutengeswa muApple Chitoro chavo, icho chakatomisa mwenje mukambani yedrone seApple inogona chikamu mune iwo marudzi ezvigadzirwa. Kupeta iyo curl, DJI yakaburitsa yakasarudzika edition yeako Mavic Pro drone blank kuve padhuze padyo nefilosofi yeApple.
Kuona zvese izvi ... Izvo zvine hukama zvakanyanya neApple kupfuura isu zvatinofunga? Ko DJI ichave iri kambani iyo Apple iri kuyedza zvese zvine chekuita neVR uye nekudaro ichisiyana nezvose zvinowirirana vhidhiyo zvigadzirwa? Apple mureza?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Iyo drone uye kamera kambani DJI inoenderana zvakanyanya neApple kupfuura isu zvatinofunga?